Dreame D9 Max, nyocha nke igwe nhicha ikuku robot kacha ọhụrụ | Ozi gadget
Dreame D9 Max, nyocha nke igwe nhicha ikuku robot kacha ọhụrụ
Miguel Hernandez | 30/12/2021 10:59 | General, Nyocha
Ndị na-ehicha ikuku robot abụrụla otu n'ime "kwesịrị" nke ụlọ ndị kacha kwekọrịtara na teknụzụ kachasị ọhụrụ. Ndị a enweela ọganihu dị ịrịba ama na nkwalite na arụmọrụ yana nsonaazụ nke mere ka ha bụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ndị nwere onwe ha na-eme ka ụbọchị anyị dịkwuo mfe.
N'oge a Ọchịchọ m enweghị ike ịgbaghara nhọpụta ahụ, na-enye ọnụ ọgụgụ dị mma nke ngwọta na uru dị mma maka ego n'ụdị ngwaahịa teknụzụ a. Anyị na-enyocha Dreame D9 Max ọhụrụ, onye na-ehicha oghere robot nwere arụmọrụ dị elu yana nsonaazụ dị mma, Chọpụta na anyị na ị ga-enwe ike ịtụle ma ọ bara uru ịzụrụ gị n'ezie, ma ọ bụ na ọ bụghị.
2 Isi njirimara teknụzụ
3 Nnwere onwe na ngwa
4 Teknụzụ eji na echiche ndị ndezi
Dị ka n'oge ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ nke ngwaahịa ya, Dreame akara mgbanwe mgbanwe na imewe na-ewu àgwà nke ngwaahịa ya na-akwanyere ndị ọzọ, na-ahụ na ya na-agbanwe agbanwe adịghị ahụ anya n'usoro nke àgwà. Anyị na-eche ihu igwe nhicha ikuku robot nwere oke ahịa, ịkụ nzọ na nha 35 × 9,6 nke ga-abụ ihe dịka 3,8Kg, Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na okwu arọ dị na ngwaọrụ ndị a adịghị mkpa, ebe ọ bụ na anyị agaghị ebu ha. Ọnụahịa ya ga-agbagharị gburugburu 299 euro na isi ihe ire ere. Ọzọkwa ma ọ bụrụ na ị chọrọ mmezi ego ị nwere ike iji coupon DREAMED9MAX.
Akụkụ: 35 × 9,6 sentimita
Ibu ibu: 3,8 n'arọ
Dị na agba: Oji na-egbuke egbuke na ọcha na-egbuke egbuke
Ikpochapụ na ịsachapụ ọnụ
Ọ nwere brush etiti gbasiri ike na ala nke jikọtara teknụzụ dị iche iche, yana ahịhịa otu akụkụ. N'elu anyị na-ahụ bọtịnụ njikwa akwụkwọ ntuziaka atọ, nke a na-ahụkarị "hump" ugbu a. N'ịnyịnya site na robots niile nwere teknụzụ laser na mmezi maka tank mmiri. Maka akụkụ nke ya, tankị unyi dị n'azụ ọnụ ụzọ na mpaghara elu, ebe ha na-adịkarị na ngwaahịa Roborock na Dreame mgbe niile. Dị ka ị na-ahụ site na foto ndị a, anyị enyochala ihe nlereanya na nwa.
Isi njirimara teknụzụ
Banyere nkwakọ ngwaahịa, Dreame na-arụ ọrụ nke ọma na ngalaba a. na-enye ihe ndị dị mfe ma dị mkpa n'oge a: Ngwaọrụ, isi nchaji na ọkụ ọkụ, ahịhịa n'akụkụ, tank mmiri na mop gụnyere, ngwá ọrụ ihicha (n'ime robot, ebe tankị mkpofu) na ntuziaka ntụziaka. Agbagharala m ihe ngbanwe dị ka mops ndị ọzọ, nzacha nnọchi ma ọ bụ ahịhịa n'akụkụ dochie anya.
Ngwaọrụ nwere njikọta - Wifi, ma dị ka ọ na-emekarị na ngwaọrụ ndị a, anyị ga-eburu n'uche na ọ ga-abụ naanị dakọtara na netwọk 2,4GHz. Nke ahụ kwuru, anyị na-ahụ usoro nke nLDS 3.0 Laser Navigation LiDAR ezi ịrụ ọrụ nke ọma, nke a ga-esonyere gị Mmiri 570ml maka unyi na 270ml maka mmiri ma ọ bụ ihicha mmiri mmiri na anyị chọrọ inye, ọ bụrụhaala na ọ dakọtara na ma ngwaọrụ na ala anyị ajụjụ, ihe nke anyị kwesịrị ịkpọtụrụ ntuziaka ntuziaka na mbụ.
Banyere ike mmịpụta, Dreame na-akọ na ụdị 4000 Pascal pro a, a pụtara elu na oru oma ike na-atụle ntụnyere ndị ọzọ na ngwaahịa nke kasị mma kpọrọ rival ụdị. N'iburu n'uche ike mmịpụta ahụ, anyị ga-ahụ ụda ndị na-apụta n'etiti 50db na 65db mkpokọta, nke na-emekwa ka ọ bụrụ onye na-ehicha ikuku rọba dị jụụ ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ngalaba a akọwapụtara. Ụda ahụ ga-adabere na ọkwa ike anọ dị iche iche nke anyị nwere ike ijikwa site na ngwa ahụ.
Nnwere onwe na ngwa
Hazie ụzọ smart
Mepụta map ndị akọwapụtara
Hichaa ọnụ ụlọ ndị akọwapụtara
Hichaa ebe masịrị gị
Machibidoro ịbanye ebe ụfọdụ
Anyị nwere, kedu ka ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụghị, mekọrịta ya na Alexa Alexa, Ya mere, ụbọchị ga-adị mfe ma ọ bụrụ na anyị na-ajụ anyị virtual nnyemaaka na ọrụ. A ga-arụ ọrụ mmekọrịta na njikwa ngwaọrụ site na ngwa Mi Home dị maka ya android dika iOS. Ga-arụ ọrụ ọbụna mgbe anyị na-anọghị n'ụlọ. Ekele diri smartphone anyị na ngwa nke anyị, Anyị nwere ike ịchịkwa ihicha ụlọ site n'ebe ọ bụla, ịnweta map na ijikwa ebe nhicha.
Teknụzụ eji na echiche ndị ndezi
Anyị na-ezute na Dreame D9 Max teknụzụ bụ isi nke Dreame chepụtara na ụdị ngwaahịa ndị a, dịka a usoro njikwa iru mmiri iji jikwaa mmiri a na-eji ihicha ma ghara imebi parquet, yana usoro nsị nwere ọgụgụ isi Kapet Boost nke ga-eme ka ihe dị iche iche nke kapeeti si n'ala siri ike na-achịkwa ike nke ihe mkpofu.
Gụnyere nzacha HEPA dị elu nke ọma.
Ahụmahụ anyị dị ezigbo mma n'ihe gbasara ịchafụ, na ike, na-enweghị mkpọtụ na ụzọ dị mma e mere site na nyocha LiDAR, dị ka mgbe niile, ịchafụ bụ ihe na-eme ka mmiri dị mmiri nke na n'ọnọdụ ụfọdụ nwere ike ịmepụta akara mmiri n'ala na dabere na ihe mejupụtara ya, yabụ anyị na-akwado ịkpọtụrụ onye nrụpụta. Ị nwere ike nweta ya na ọnụ ahịa ga-esi na euro 299 nwere onyinye dị iche iche, na-aghọ nhọrọ mara mma n'ihe gbasara ogo / ọnụahịa ya.
Ihe na: December 30 nke 2021
Mgbanwe ikpeazụ: 4 de enero de 2022
Maapụ smart na arụmọrụ dị elu
Ezi ịmị mmiri
Obere mkpọtụ na nsonaazụ dị mma
Ichacha mgbe ụfọdụ na-ahapụ akara
Ọ na-efu na ha gụnyere ihe ndị ọzọ iji dochie anya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Dreame D9 Max, nyocha nke igwe nhicha ikuku robot kacha ọhụrụ
Mwepụta onyinye: Blackview BV8800 maka naanị euro 225
Dreame H11 Wet and Dry, nlebanya miri emi nke oghere / mop a